हरियो वन कस्को धन ? - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Headline1 Headline2 Main News National हरियो वन कस्को धन ?
काठमाडौं, १६ मंसिर । सरकारी, सामुदायिक र निजी वन क्षेत्रबाट अघिल्लो वर्ष एक करोड ७५ लाख ५२ हजार क्युफिट काठ उत्पादन भएको तथ्यांक वन मन्त्रालयसँग छ । तर काठको माग भने मुलुकभर वार्षिक तीन करोड क्युफिटभन्दा बढी छ । आन्तरिक उत्पादनभन्दा माग बढी भएपछि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत् वार्षिक ६० लाख क्युफिट काठ थप गर्ने र निजी वनबाट समेत उत्पादन बढाउने वन मन्त्रालयको योजना छ । तर आवश्यकताभन्दा बढी नै झण्झटिलो वन नीतिले काठ उत्पादन र उपयोगको प्रक्रिया नै जटिल छ । अझ साल, साज, सिसौ, देवदार लगायत सुकाठ निजी तवरबाट हुर्काउँदा ५० देखि ८० वर्ष लगाउनुपर्ने तर काट्न नपाइने भएकाले बिरूवा निजी जमिनमा हुर्कनै नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ।